Aqoonkaab Dhaqamo ay sameeyaan dadka naf ahaan u caafimaad qabaa,adna maxaad sidaas u samayn wayday? | Aqoonkaab
Dhaqamo ay sameeyaan dadka naf ahaan u caafimaad qabaa,adna maxaad sidaas u samayn wayday?
Jun 23, 2016Arrimaha bulshada
Waxa jira dhaqamo togan oo ay ku sifaysan yihiin dadka badhkood, waxaan jeclaaday inaan ku magacaabo kuwa ‘’ naf ahaan u caafimaad qaba’’. dhaqamadan marka la isu geeyo waxa ay noloshooda ku midabaysaa midabo aad u qurux badan, dadka kalana way kaga duwanaadaan. Haddaad tahay mid sameeya mid ama badhka mida dhaqamadan waxaa tahay mid haya dariiqa, hadday tahay mayna ogow maqaalkani waa jalas kuugu yeedhaya nolol daggan oo raali aad ka tahay.
Waxay u ciyaaraan si joogto ah, maalin walba ama tira go’an oo usbuucii ka mid ah, ciyaartu maaha iska raaxaysi uun siday dadka qaar u haystaan, laakiin waa qayb asaasi ah oo ka mid ah qof kastoo noloshiisu isu dheeli tiran tahay, intaa waxa dheer faaidooyinkeeda jidheed iyo raadaynta ay ku leedahay xubnaha jidhkee kala duwan, waxay leedahay faaidooyin nafeed oo aan ka dhicin kuwa ay jidhka u leedahay.
Waa habka ugu fiican ee jidhka looga saaro dhammaan dareemada taban, cidhiidhiga, isku buuqa iyo cadhadaba. Waa habka ugu fiican ee ka caawiya maskaxdu inay dareento dagganaan. Sidoo kale xilliga ugu wanaagsan ee la fakaraa waa marka aad soconayso ama ordayso adigoo jimicsanaya. Sidaa daraadeed hadday tahay ciyaartu qayb asaasiya oo kamid ah noloshaada waxay ka dhigan tahay inaad qaadday tallaabadii ugu horraysay ee caafimaad qabka nafeed.
Nolol aan shaqo lahayni waa bilaa qiime, hase ahaatee sida la yaqaan wax kasto oo intii la aqbali karayay ka bataa wuxuu isu badalaa dhibaato, sidaa darteed ha moodin haddii aad maalintii shaqayso 10 saacadood inaad ujeedooyinkaaga gaadhayso si ka dhakhso badan haddii aad 8 saacadood shaqayn lahayd, taasi sax maaha, sida aad ugu baahan tahay shaqada ayaad ugu baahan tahay raaxo, si aad u awoodo inaad shaqadaada si fiican uga soo baxdo maalinta xigta. Sidaa darteed ha saarin naftaada culays aanay qaadi Karin hana shaqaynin wax ka badan siddeed saacadood maalintii.
Gol daloolooyinka iyo naqdinta
Ma jiro qof inaga midoo bilaa goldoloolii, bashar ayaynu nahay wanaagyo iyo simbiririxashaba waynu leenahay. Waa in aynu ogaanaa ceebaheena oo baadhnaa sidii aynu ku dawayn lahayn. Sidaa darteed hadduu qof ku naqdiyo ama kuu nasteexeeyo haka cadhoon ee u mahadnaq waayo wuxuu kaa caawiyay inaad naftaada barato.
U fakaridda qaab togan
Ufakaridda dhinaca togan ujeedadeedu waa inaad mushkiladaha u badasho wanaagyo, kana eegto waxkasta dhinac aanad ka eegin mar hore. Hadduu gaadhigu kaa jabo inta aanad shaqada qaban subixii maaha inay maalintaasi noqotay mid mushkilad badan, balse waa fursad aad kaga faaidaysan karto inaad jimicsato oo lugta ku tagto shaqada hadday meesha shaqadu dhawdahay, ama aad adeegsato gaadiidka guud sida basaska, halkaas oo ay kaaga soo baxayso fursad aad wax ku akhrido ama ku fakarto.
Mid kasta oo inaga mid ahiba wuxuu leehayahay wax uu ka helo, uuna jecel yahay inuu nolooshoo dhan ku qaato. Dadka qaar baa jecel sawirka, qaar baa jecel inay wax hagaajiyaan, ma jirto hiwaayad qiimo badan leh iyo mid kaloo bilaa qiima ah, balse qiimaheedu wuxuu ka yimaadaa inta ay saamayso nolosha qofka.
Dayday hiwaayad ama wax aad jeceshahay inaad qabato taas oo ku farxad galinaysa, kuna dar hingsiga noloshaada.
Previous PostLighten PDF to Word Converter 5.0 Next PostMedia classic player Home cinema